अन्तर्वार्ता Archives - eagronews.com
कृषि उद्यममा रमाएका वकिल
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०९:०१
वकिल अर्थात् अधिवक्ताको काम के हो ? अदालतमा वहस गर्नु, झगडियाहरुसंग मिलेमतो गर्नु र सानो कुरालाई पनि ‘कानुनका नौ सिङ्ग’ समातेर डर लाग्दोसंग प्रस्तुत गर्नु । तर, सबैको हकमा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । समाजमा…
२४ बैशाख २०७७, बुधबार १६:१०
जागिर गर्नेहरुको लागि संभवतः सबैभन्दा अप्रिय शब्द हो—अवकाश । तर, अवकाश पाउन ८ वर्ष छंदा राजिनामा दिएका कृषि प्राविधिक पुस्कर आचार्यले त्यसयताको २ वर्षको अवधिमा जति व्यस्त हुनुभयो, संभवतः जागिरे जीवनमा कहिल्यै हुनु भएन ।…
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०९:५५
पढाई अनुसारको काम गरिरहेको भए राजन गैरे यति बेला कुनै ठुलै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाको ‘इन्जिनियर सा’प’को रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले उहाँलाई इन्जिनियरको रूपमा कसैले चिन्दैन । किनकि उहाँले अचेल ‘इन्जिनियरिङ’को काम गर्नु…
१० बैशाख २०७७, बुधबार ०५:२०
कोरोना महामारीमा कृषि विकास मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ ? हामीले एउटा ‘रेस्पोन्स टिम’ बनाएका छौँ । त्यो टिममा मसहित पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्मा र मन्त्रीज्यूको सचिवालयका पूर्णबहादुर बुढा गरी तीन जना…
८ बैशाख २०७७, सोमबार ०५:४०
लक डाउनको समय अवधिमा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले के काम गरिरहेको छ ? हामीले जिल्लाका प्रशासनिक कार्यालय र किसानहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ,…
४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०७:०३
लक डाउनको समयमा कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेले के काम गरिरहेको छ ? हाम्रो कार्य क्षेत्र काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोक दुई जिल्ला हुन् र ती दुई जिल्लाका २५ वटा स्थानीय निकाय छन् । ती सबै स्थानीय निकायमा…
टेलिफोनबाट कृषकको समस्या समाधान गरिरहेका छौँ : कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख निर्मल गदाल
३ बैशाख २०७७, बुधबार १२:०१
कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले के काम गरिरहेको छ ? स्थिति अहिले निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । तै पनि हामीले निकै सचेतनासाथ काम गरिरहेका छौँ । सरकारले गोष्ठी, सेमिनार गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैले…
२ बैशाख २०७७, मंगलवार १३:५८
सरकारले चैत्र १० गते ‘लक डाउन’को घोषणा गरेपछि शनिस लागेजुलाई राती निद्रा लागेन । च्याउ फलेको छ, बजारमा लैजान ठिक्क छ । गर्ने के ? सुकाएर सुकुटी बनाउने कुरा दिमागमा नआएको होइन । तर, त्यो…
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार १३:२०
शान्ता बास्कोटा कोइराला ‘ध्यान र अनलाइन बैठकहरू गर्दैछु’ परिवारसँग बसेर दिन बिताउदैछु । त्यसबाहेक केही अनलाइन कोर्सहरू गर्दैछु । बेला बेलामा अफिसका साथीहरूसँग अनलाइन मिटिङहरू पनि गर्छु भने विभिन्न उद्यमीहरूसँग पनि छलफल गर्ने गरेकी छु…
२६ चैत्र २०७६, बुधबार ०५:०४
गोविन्द घिमिरे अध्यक्ष नेपाल हब्र्स तथा हर्बल एसोसिएसन (नेहफा) “नीति नियमको अध्ययन गर्दैछु” सरकारको आर्थिक ऐन कानुन, खासगरि बन र जडीबुटी उद्यमसँग सम्बन्धित नीति नियम तथा भू उपयोग नीतिको बारेमा अध्ययन गरेर लगभग सकेँ ।…